Milateriga Soomaaliya oo raba inuu awood raashin ku gaarsiiyo Buulobarde – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Milateriga Soomaaliya oo raba inuu awood raashin ku gaarsiiyo Buulobarde
29th December 2014 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa rabta iney si awdood kaalmo laga qaaday Muqdisho ku gaarsiiso degmada Buulo Barde ee gobolka Hiiraan, halkaasoo Alshabaab weli go’;doon ku hayaan.
Degmada Buulo Barde waxaa gacanta ku haya ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee ka socda Jabuuti, hase ahaatee Alshabaab ayaa ka jira afarta dhinac, taasoo keentay in la gaarsiin waayo kaalmo gargaar.
Ciidamo fara badan oo ka tirsan Milateriga Soomaaliya ayaa buux dhaafiyay degmada Jalalaqsi ee Gobolka Hiiraan, kadib markii ay ka ambabaxeen magaalada Muqdisho, iyadoo ciidankan ay ku hubeysan yihiin gaadiid fara badan oo kuwa dagaalka ah.
Ciidamadan ayaa la filayaa inay xoog ku gelbiyaan gawaari sida shixnad gar gaar ah oo 70-cisho ku xaniban degmada Jalalaqsi, kaasoo la doonayo in la gaarsiiyo degmada Buulo Burde oo muddo 10-bilood go’doon ku jirta.
Ciidamadan oo safar dhulka ah kaga soo ambabaxay magaalada Muqdisho ayaa sii maray magaalada Jowhar.
Taliyaha Qeybta 12-ka April Jen, Maxamuud Maxamed Qaafow ayaa sheegay in qorshahooda uu yahay sidii ay raashinkaas xoog ku gaarsiin lahaayeen degmada Buulo Burde, iyadoo inta u dhaxeysa Jalalaqsi iyo Buulo Burde ay ku sugan yihiin dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab.
“Ciidamada dowladda ayaa diyaar u ah iney gaadiidka xamuulka gaarsiiyaan degmada Buulo Barde, haddii Alshabaab awood leeyihiin ha isku dayaano iney horjoogsadaan” ayuu yiri Jen. Qaafow.
Jen. Qaafow oo la weydiiyey in ciidamada AMISOM ay ka qeyb qaadanayaan galbinta raashinkaas iyo inkale ayaa sheegay in milateriga Soomaaliya uu howshaas qabanayo haddii AMISOM la shaqeeyneysana ay soo dhaweynayaan.
Wararka ayaa intaa ku daraya in galbinta raashinkan ay ka qeyb qaadan doonaan Ciidamada AMISOM ee ka socda dalka Burundi, kuna sugan degmada Jalalaqsi.
Bishii September ee sanadkaan 2014, ciidamada Jabuuti ee ku sugan Baledweyne iyo ciidamada Soomaaliya ayaa Buulo Barde gaarsiiyey raashin uu soo dhiibay madaxweynaha Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle, waxeyna wadada ku jireen muddo labo maalmood ah.
Madaxweynaha Soomaaliya oo gaaray Masar (Sababta booqashada & cidda uu la kulmayo)
Wadaad Muslim ah oo ay xireen ciidamada Kenya oo meydkiisa la helay